VONONY NY GRID subtitles October 27, 2020
VONONY NY GRID subtitles
Inona no mitranga rehefa tsy ny DM no manapa-kevitra izay hitranga mandritra ny lalao? aoka milazalaza ny toe-javatra aho: Ka nilalao an-tserasera sy an-trano aho nandritra ny fotoana nilalaovako. Tany ambanivohitra aho tamin'ity tranga ity Texas tamin'izany fotoana izany, nilalao lalao an-tsehatra notantanan'ny namako. Natomboka izahay amin'ny ambaratonga 1 ao amin'ny Pathfinder, ary hiala voly amin'ny tanànan'i Absaloma izahay. ary satria mbola niara-nipetraka tamin'ny ray aman-dreninay izaho sy ny namako dia nilatsaka an-tsitrapo ny roa tamin'ireo mpilalao izahay mba hilalao ao an-tranony. Toa hevitra tsara izany tamin'izany! Toy ny mahazatra, ny anarana rehetra voatanisa dia tsy tena anarana. Manana isika: Izaho, mpianatra efa mianatra eny amin'ny oniversite miasa any Walmart tamin'izany, milalao mpamosavy antsasaky ny orc. Ilay DM izay namako tany amin'ny oniversite tamin'izany. Naman'ny namako atao hoe Dan izay mpitondra fivavahana ary tany amin'ny oniversite koa. Bob izay veteranin'ny tafika ary ... tsara, ho fantatrao vetivety ny momba azy. 30-zavatra taona, bandy be, mampatahotra. Traikefa amin'ny ady. Ary nanao barbariana izy. Lisa, vadin'i Bob. Mino aho fa miaramila taloha koa izy, ary ... hianaranao bebe kokoa ihany koa momba azy. 30-taona taona, mampatahotra amin'ny zony manokana. Ary nilalao elf elf izy Rogue. Ankehitriny, niara-nilalao tamin'i Bob sy i Lisa tao amin'ny fivarotana kilalao teny an-toerana izahay nandritra ny fotoana fohy. (Raha jerena ny jery todika fa toa voaozona ny fivarotana kilalao iray manontolo, raha ny marina.) Nilalao tabilao izahay lalao, lalao kilalao sasany, kilalao fety sasany - ireo karazan-javatra ireo. Kely izy ireo, araka ny eritreritro? Bob dia miaramila miaramila ary nanana fahasahian-tena kely, ary i Lisa dia nanana fahasahiany kely ihany. Tsaroako tsara izy mirahalahy nanao kabary lava momba ny fomba ahafahan'ny vehivavy tanteraka pee mijoro eo amin'ny sehatry ny lalao birao sasany, ary tadidiko fa mafy sy nieboebo izy ireo izany, fa ... Tsy misy tokony hampanahy azy samirery. Kinda hafahafa amin'ny azy ireo fomba, saingy toa feno hafanam-po fotsiny izy ireo. Na izany na tsy izany, mila toerana hilalaovana izahay. Nanolotra ny tranony i Bob. Nilaza izy fa manana latabatra lehibe sy lehibe mety amin'ny vondron'olona 6 tsara izany, ary nihevitra ny hahazo mpilalao fahenina izahay amin'ny farany. Tsy safidy ny tranoko; Tsy safidy ny tranon'i DM; sy ny trano fonenan'i Dan dia adiny iray farafahakeliny fiara tsy lavitra ny tanànantsika. Ka toa tsara ny tranon'i Bob sy Lisa toerana filalaovana. Tsy toerana nilalao azy io, raha ny marina. Ka niaraka niampita tany amin'ilay toerana izahay sy DM. Izaho no nitondra fiara, ary ny namako DM kosa amin'ny telefaona mahazo lalana. Somary manjavozavo ny lalana, ary naneho hevitra avy hatrany izy rehefa nahavita zavatra teny an-dàlana izahay: "Oh, hey, nilaza i Bob fa tsy tiany izahay mba hilaza amin'ny olona momba ny toerana onenany. " "Nahoana?" Nanontany voajanahary aho. "Misy olana momba ny olana ara-dalàna, tsy haiko." Haavo ny ahiahy: 1 Na izany na tsy izany. Fantatro fa nihomehy ilay tovolahy na zavatra hafa. Na izany na tsy izany, mitondra fiara mankany amin'ilay toerana isika taorian'ny nahitanay azy tamin'ny farany (hafahafa sy tsy manjavozavo ny lalana), saingy hitantsika ny lalan-kaleha ary manomboka misintona. Tamin'izay no nanomboka nitsoaka taminay ireo huskies any Alaska ireo. Manapa-kevitra izahay Mijanona ao anaty fiara satria alika be ireo, ary mandeha i Bob rehefa avy niantso azy izahay dia sasao izy ireo, ary mitarika antsika hiditra. Milamina ao an-trano izahay. Ny alika dia miakatra mandritra ny resaka. Lazainay aminy fa izy ireo alika tsara tarehy. Mihomehy izy ary miteny hoe: "Fantatrao fa nahafaty lehilahy iray tanteraka izy ireo." Avy eo averiny ihany izany amin'ny feo matotra kokoa, milaza hoe "Tsia matotra. Voaofana izy ireo ary TSY MAINTSY tanteraka vonoy ny lehilahy manafatra azy. " Haavo ny ahiahy: 2 Ny trano, farafaharatsiny, tsara. Nanontany anay haingana i Bob sy i Lisa hoe: "Azonareo marina izany fa tsy narahina ianao, sa tsy izany? Tena zava-dehibe ho anao ny tsy hilaza amin'ny polisy izany isika. "Tsy hiteny ny antony izy ireo fa ny filazany fotsiny. Haavo fanahiana: 3. Jereo ... tamin'izay fotoana izay dia tokony hiala fotsiny aho, saingy nahazo ny fahatsapana manokana raha nanandrana aho hiala aho dia nangataka tamin'ireto mpivady adala ireto hanao zavatra amiko. Ny sela telefaona koa tsy voampanga. Oops. Na izany na tsy izany, eo am-pitaterana lava izahay, ka mipetrapetraka izahay. Tsara indray ny trano; ny latabatra dia lehibe araka ny nanolorana azy hevitra. Avy eo fantatro fa manana basy ao an-tranony ilay bandy ... Ahiahy Haavo: 4. Mandeha hatrany izahay. DM sy Dan dia toa mbola tsy dia miraharaha na inona na inona. Izahay ihany amin'ny farany manomboka milalao ny lalao, mampiditra ny endri-tsoratra sns ... Avy eo tonga ny fotoana hanao traikefa nahafinaritra! Amin'ny fotoana iray mandritra io traikefa nahafinaritra io dia misy ady hevitra misy eo amin'ny DM sy Bob. Hoy i DM "Eny, izaho DM." Hoy i Bob: "Ary tranoko io." ... Eny ary. Haavo ny ahiahy: 5. Tsara, tsara. Amin'ity fotoana ity dia tiako fotsiny ny vita ny lalao, ary manomboka ny DM sy Dan manahy. Na dia ny fitsangatsanganana any amin'ny trano fidiovana aza dia mahatsiaro ho henjana aho. Fa amin'ny farany dia manao doka izahay, AZO hadinoko mihitsy ny hafahafa mitranga ... Miady amina karazan-trondro hafahafa isika, ary avy eo, mahita harena sarobidy isika. Ankehitriny, eo amin'ireo entana isan-karazany ao amin'ny harena, dia nisy horonam-boky majika. Nanazava aho. Hey, horonam-boky majika! Afaka nampiasa an'io tanteraka ny mpamosavy ahy. Manolo-kevitra betsaka aho, ary ho an'ny rehetra manaiky - afa-tsy ny rogue tapaky ny elf. Ny mpangalatra antsasaky ny elf dia mamaly amin'ny "Eny, manana ny Magical aho Fitaovana. "Valiako amin'ny" Fa afaka mianatra ny tsipelina avy amin'ny horonan-taratasy aho. " Ankehitriny, amin'ny ankamaroan'ny latabatra, mety nifampiraharaha kely momba izay mety hafointsika isika avy amin'ny harena ho valin'ny horonam-boky. Fa kosa, nahazo valiny aho ny: "Voalohany indrindra, tranoko io. Faharoa, ny toetrako dia afaka mandaka ny vodin-toetranareo. Fahatelo? Ao an-tranoko ianao. "Ary ny fomba nitenenany dia ny an'ny olona iray izay mandrahona olon-kafa. Tsaroako ny vadiny nijoro teo amin'ny sezany toa ny vonona hamely ny an'ny olon-kafa vody, ary ny fisian'ireny alika be eo akaiky ireny, ny fahalalana fa misy basy ny trano, ary ny zava-misy tsotra ireo olona ireo dia nilaza tamim-pahavitrihana mba tsy hilaza amin'ny polisy tonga tao an-tsaiko indray mandeha ny momba azy rehetra. Raha tsiahivina: miaramila i Bob ary efa niaina ady. Niditra ara-batana IRAY aho fifandirana nandritra ny fiainako manontolo tamin'izany fotoana izany, ary tubby aho. DM dia tubby. Dan dia tsara, zazalahy kely Kristiana mahia izay tsy handratra lalitra raha mitroka amin'ny masony. Izahay dia nandrahona ny 30 taona teo ho eo izay nitondra ny lalao "Ary handratra anao aho raha tsy mahazo izay tadiaviko "ambaratonga. Haavo ny ahiahy: 9000+ Navelako izy handray ilay horonan-taratasy. Vitanay ny lalao. Nandeha nody izahay sy DM. Araka ny nataonay dia hoy aho Izy dia nilaza mazava tsara, "Tsy mifandray amin'ireo olona ireo intsony isika, ary raha mahita Handao azy ireo eo amin'ny fivarotana kilalao izahay izao. " Tsy niresaka tamin'izy ireo intsony izahay, afa-tsy INDRINDRA. Tapaka fotsiny ny fifandraisana, Nilaza tamin'izy ireo fa tsy afaka mihazakazaka ny lalao intsony ny DM, ary dia izay. Amin'izao fotoana izao dia mandà tsy handeha any an-tranon'olona aho raha tsy hoe fantatro tsara izy ireo. Ie, faly aho fa niaina ny OP nanambara ny tantara, satria izany dia toe-javatra henjana ara-dalàna. Mora tokoa ny miatrika mpampijaly rehefa mijoro amin'ny tenanao, fa rehefa misy zavatra mandehana amin'ny feo mankany amin'ny ara-batana ary mety hamoy ny ainao ianao amin'ny fijoroana, tsara kokoa ny manaiky rehefa milalao lalao. Mitandrema amin'ny filalaovana any an-tranon'olona ary alao antoka handoavana ny findainao ary hitondra fonosana bateria ivelany miaraka aminao. Ahoana ny hevitrareo rehetra momba an'io toe-javatra io?
VONONY NY GRID
<text sub="clublinks" start="0" dur="7.689">Inona no mitranga rehefa tsy ny DM no manapa-kevitra izay hitranga mandritra ny lalao? aoka</text>
<text sub="clublinks" start="7.689" dur="2.631"> milazalaza ny toe-javatra aho:</text>
<text sub="clublinks" start="10.32" dur="7.64"> Ka nilalao an-tserasera sy an-trano aho nandritra ny fotoana nilalaovako. Tany ambanivohitra aho tamin'ity tranga ity</text>
<text sub="clublinks" start="17.96" dur="6.75"> Texas tamin'izany fotoana izany, nilalao lalao an-tsehatra notantanan'ny namako. Natomboka izahay</text>
<text sub="clublinks" start="24.71" dur="7.101"> amin'ny ambaratonga 1 ao amin'ny Pathfinder, ary hiala voly amin'ny tanànan'i Absaloma izahay. ary</text>
<text sub="clublinks" start="31.811" dur="5.369"> satria mbola niara-nipetraka tamin'ny ray aman-dreninay izaho sy ny namako dia nilatsaka an-tsitrapo ny roa tamin'ireo mpilalao</text>
<text sub="clublinks" start="37.18" dur="5.81"> izahay mba hilalao ao an-tranony. Toa hevitra tsara izany tamin'izany!</text>
<text sub="clublinks" start="42.99" dur="5.15"> Toy ny mahazatra, ny anarana rehetra voatanisa dia tsy tena anarana.</text>
<text sub="clublinks" start="48.14" dur="1"> Manana isika:</text>
<text sub="clublinks" start="49.14" dur="6.03"> Izaho, mpianatra efa mianatra eny amin'ny oniversite miasa any Walmart tamin'izany, milalao mpamosavy antsasaky ny orc.</text>
<text sub="clublinks" start="55.17" dur="4.139"> Ilay DM izay namako tany amin'ny oniversite tamin'izany.</text>
<text sub="clublinks" start="59.309" dur="7.041"> Naman'ny namako atao hoe Dan izay mpitondra fivavahana ary tany amin'ny oniversite koa.</text>
<text sub="clublinks" start="66.35" dur="7.55"> Bob izay veteranin'ny tafika ary ... tsara, ho fantatrao vetivety ny momba azy. 30-zavatra</text>
<text sub="clublinks" start="73.9" dur="8.19"> taona, bandy be, mampatahotra. Traikefa amin'ny ady. Ary nanao barbariana izy.</text>
<text sub="clublinks" start="82.09" dur="8.569"> Lisa, vadin'i Bob. Mino aho fa miaramila taloha koa izy, ary ... hianaranao bebe kokoa ihany koa</text>
<text sub="clublinks" start="90.659" dur="7.951"> momba azy. 30-taona taona, mampatahotra amin'ny zony manokana. Ary nilalao elf elf izy</text>
<text sub="clublinks" start="98.61" dur="1.029"> Rogue.</text>
<text sub="clublinks" start="99.639" dur="6.69"> Ankehitriny, niara-nilalao tamin'i Bob sy i Lisa tao amin'ny fivarotana kilalao teny an-toerana izahay nandritra ny fotoana fohy.</text>
<text sub="clublinks" start="106.329" dur="7.14"> (Raha jerena ny jery todika fa toa voaozona ny fivarotana kilalao iray manontolo, raha ny marina.) Nilalao tabilao izahay</text>
<text sub="clublinks" start="113.469" dur="8.29"> lalao, lalao kilalao sasany, kilalao fety sasany - ireo karazan-javatra ireo. Kely izy ireo, araka ny eritreritro?</text>
<text sub="clublinks" start="121.759" dur="7.2"> Bob dia miaramila miaramila ary nanana fahasahian-tena kely, ary i Lisa dia nanana fahasahiany kely ihany.</text>
<text sub="clublinks" start="128.959" dur="6.64"> Tsaroako tsara izy mirahalahy nanao kabary lava momba ny fomba ahafahan'ny vehivavy tanteraka</text>
<text sub="clublinks" start="135.599" dur="7.081"> pee mijoro eo amin'ny sehatry ny lalao birao sasany, ary tadidiko fa mafy sy nieboebo izy ireo</text>
<text sub="clublinks" start="142.68" dur="7.029"> izany, fa ... Tsy misy tokony hampanahy azy samirery. Kinda hafahafa amin'ny azy ireo</text>
<text sub="clublinks" start="149.709" dur="4.431"> fomba, saingy toa feno hafanam-po fotsiny izy ireo.</text>
<text sub="clublinks" start="154.14" dur="7.73"> Na izany na tsy izany, mila toerana hilalaovana izahay. Nanolotra ny tranony i Bob. Nilaza izy fa manana latabatra lehibe sy lehibe</text>
<text sub="clublinks" start="161.87" dur="6.06"> mety amin'ny vondron'olona 6 tsara izany, ary nihevitra ny hahazo mpilalao fahenina izahay</text>
<text sub="clublinks" start="167.93" dur="8.41"> amin'ny farany. Tsy safidy ny tranoko; Tsy safidy ny tranon'i DM; sy ny trano fonenan'i Dan</text>
<text sub="clublinks" start="176.34" dur="6.11"> dia adiny iray farafahakeliny fiara tsy lavitra ny tanànantsika. Ka toa tsara ny tranon'i Bob sy Lisa</text>
<text sub="clublinks" start="182.45" dur="1.35"> toerana filalaovana.</text>
<text sub="clublinks" start="183.8" dur="4.189"> Tsy toerana nilalao azy io, raha ny marina.</text>
<text sub="clublinks" start="187.989" dur="7.901"> Ka niaraka niampita tany amin'ilay toerana izahay sy DM. Izaho no nitondra fiara, ary ny namako DM kosa</text>
<text sub="clublinks" start="195.89" dur="7.22"> amin'ny telefaona mahazo lalana. Somary manjavozavo ny lalana, ary naneho hevitra avy hatrany izy</text>
<text sub="clublinks" start="203.11" dur="6.28"> rehefa nahavita zavatra teny an-dàlana izahay: "Oh, hey, nilaza i Bob fa tsy tiany izahay</text>
<text sub="clublinks" start="209.39" dur="2.7"> mba hilaza amin'ny olona momba ny toerana onenany. "</text>
<text sub="clublinks" start="212.09" dur="2.83"> "Nahoana?" Nanontany voajanahary aho.</text>
<text sub="clublinks" start="214.92" dur="3.929"> "Misy olana momba ny olana ara-dalàna, tsy haiko."</text>
<text sub="clublinks" start="218.849" dur="1.581"> Haavo ny ahiahy: 1</text>
<text sub="clublinks" start="220.43" dur="6.75"> Na izany na tsy izany. Fantatro fa nihomehy ilay tovolahy na zavatra hafa. Na izany na tsy izany, mitondra fiara mankany amin'ilay toerana isika</text>
<text sub="clublinks" start="227.18" dur="6.49"> taorian'ny nahitanay azy tamin'ny farany (hafahafa sy tsy manjavozavo ny lalana), saingy hitantsika ny lalan-kaleha</text>
<text sub="clublinks" start="233.67" dur="7.12"> ary manomboka misintona. Tamin'izay no nanomboka nitsoaka taminay ireo huskies any Alaska ireo. Manapa-kevitra izahay</text>
<text sub="clublinks" start="240.79" dur="6.779"> Mijanona ao anaty fiara satria alika be ireo, ary mandeha i Bob rehefa avy niantso azy izahay dia sasao</text>
<text sub="clublinks" start="247.569" dur="1.98"> izy ireo, ary mitarika antsika hiditra.</text>
<text sub="clublinks" start="249.549" dur="5.881"> Milamina ao an-trano izahay. Ny alika dia miakatra mandritra ny resaka. Lazainay aminy fa izy ireo</text>
<text sub="clublinks" start="255.43" dur="8.96"> alika tsara tarehy. Mihomehy izy ary miteny hoe: "Fantatrao fa nahafaty lehilahy iray tanteraka izy ireo." Avy eo averiny ihany</text>
<text sub="clublinks" start="264.39" dur="8.27"> izany amin'ny feo matotra kokoa, milaza hoe "Tsia matotra. Voaofana izy ireo ary TSY MAINTSY tanteraka</text>
<text sub="clublinks" start="272.66" dur="3.02"> vonoy ny lehilahy manafatra azy. "</text>
<text sub="clublinks" start="275.68" dur="1.87"> Haavo ny ahiahy: 2</text>
<text sub="clublinks" start="277.55" dur="6.24"> Ny trano, farafaharatsiny, tsara. Nanontany anay haingana i Bob sy i Lisa hoe: "Azonareo marina izany</text>
<text sub="clublinks" start="283.79" dur="5.07"> fa tsy narahina ianao, sa tsy izany? Tena zava-dehibe ho anao ny tsy hilaza amin'ny polisy izany</text>
<text sub="clublinks" start="288.86" dur="6.41"> isika. "Tsy hiteny ny antony izy ireo fa ny filazany fotsiny. Haavo fanahiana: 3.</text>
<text sub="clublinks" start="295.27" dur="6.53"> Jereo ... tamin'izay fotoana izay dia tokony hiala fotsiny aho, saingy nahazo ny fahatsapana manokana raha nanandrana aho</text>
<text sub="clublinks" start="301.8" dur="8.12"> hiala aho dia nangataka tamin'ireto mpivady adala ireto hanao zavatra amiko. Ny sela</text>
<text sub="clublinks" start="309.92" dur="3.87"> telefaona koa tsy voampanga. Oops.</text>
<text sub="clublinks" start="313.79" dur="8.41"> Na izany na tsy izany, eo am-pitaterana lava izahay, ka mipetrapetraka izahay. Tsara indray ny trano; ny</text>
<text sub="clublinks" start="322.2" dur="7.31"> latabatra dia lehibe araka ny nanolorana azy hevitra. Avy eo fantatro fa manana basy ao an-tranony ilay bandy ... Ahiahy</text>
<text sub="clublinks" start="329.51" dur="1.66"> Haavo: 4.</text>
<text sub="clublinks" start="331.17" dur="6.97"> Mandeha hatrany izahay. DM sy Dan dia toa mbola tsy dia miraharaha na inona na inona. Izahay ihany amin'ny farany</text>
<text sub="clublinks" start="338.14" dur="7.47"> manomboka milalao ny lalao, mampiditra ny endri-tsoratra sns ... Avy eo tonga ny fotoana hanao traikefa nahafinaritra!</text>
<text sub="clublinks" start="345.61" dur="9.02"> Amin'ny fotoana iray mandritra io traikefa nahafinaritra io dia misy ady hevitra misy eo amin'ny DM sy Bob. Hoy i DM</text>
<text sub="clublinks" start="354.63" dur="7.66"> "Eny, izaho DM." Hoy i Bob: "Ary tranoko io." ... Eny ary.</text>
<text sub="clublinks" start="362.29" dur="1.56"> Haavo ny ahiahy: 5.</text>
<text sub="clublinks" start="363.85" dur="8.56"> Tsara, tsara. Amin'ity fotoana ity dia tiako fotsiny ny vita ny lalao, ary manomboka ny DM sy Dan</text>
<text sub="clublinks" start="372.41" dur="8.82"> manahy. Na dia ny fitsangatsanganana any amin'ny trano fidiovana aza dia mahatsiaro ho henjana aho. Fa amin'ny farany dia manao doka izahay,</text>
<text sub="clublinks" start="381.23" dur="6.49"> AZO hadinoko mihitsy ny hafahafa mitranga ... Miady amina karazan-trondro hafahafa isika,</text>
<text sub="clublinks" start="387.72" dur="2.21"> ary avy eo, mahita harena sarobidy isika.</text>
<text sub="clublinks" start="389.93" dur="6.85"> Ankehitriny, eo amin'ireo entana isan-karazany ao amin'ny harena, dia nisy horonam-boky majika. Nanazava aho.</text>
<text sub="clublinks" start="396.78" dur="7.16"> Hey, horonam-boky majika! Afaka nampiasa an'io tanteraka ny mpamosavy ahy. Manolo-kevitra betsaka aho, ary ho an'ny rehetra</text>
<text sub="clublinks" start="403.94" dur="9.57"> manaiky - afa-tsy ny rogue tapaky ny elf. Ny mpangalatra antsasaky ny elf dia mamaly amin'ny "Eny, manana ny Magical aho</text>
<text sub="clublinks" start="413.51" dur="5.16"> Fitaovana. "Valiako amin'ny" Fa afaka mianatra ny tsipelina avy amin'ny horonan-taratasy aho. "</text>
<text sub="clublinks" start="418.67" dur="6.16"> Ankehitriny, amin'ny ankamaroan'ny latabatra, mety nifampiraharaha kely momba izay mety hafointsika isika</text>
<text sub="clublinks" start="424.83" dur="6.55"> avy amin'ny harena ho valin'ny horonam-boky. Fa kosa, nahazo valiny aho</text>
<text sub="clublinks" start="431.38" dur="8.38"> ny: "Voalohany indrindra, tranoko io. Faharoa, ny toetrako dia afaka mandaka ny vodin-toetranareo.</text>
<text sub="clublinks" start="439.76" dur="8.33"> Fahatelo? Ao an-tranoko ianao. "Ary ny fomba nitenenany dia ny an'ny olona iray izay mandrahona</text>
<text sub="clublinks" start="448.09" dur="6.77"> olon-kafa. Tsaroako ny vadiny nijoro teo amin'ny sezany toa ny vonona hamely ny an'ny olon-kafa</text>
<text sub="clublinks" start="454.86" dur="6.11"> vody, ary ny fisian'ireny alika be eo akaiky ireny, ny fahalalana fa misy basy</text>
<text sub="clublinks" start="460.97" dur="6.19"> ny trano, ary ny zava-misy tsotra ireo olona ireo dia nilaza tamim-pahavitrihana mba tsy hilaza amin'ny polisy</text>
<text sub="clublinks" start="467.16" dur="5.23"> tonga tao an-tsaiko indray mandeha ny momba azy rehetra.</text>
<text sub="clublinks" start="472.39" dur="9.01"> Raha tsiahivina: miaramila i Bob ary efa niaina ady. Niditra ara-batana IRAY aho</text>
<text sub="clublinks" start="481.4" dur="9.15"> fifandirana nandritra ny fiainako manontolo tamin'izany fotoana izany, ary tubby aho. DM dia tubby. Dan dia tsara,</text>
<text sub="clublinks" start="490.55" dur="7.07"> zazalahy kely Kristiana mahia izay tsy handratra lalitra raha mitroka amin'ny masony. Izahay dia</text>
<text sub="clublinks" start="497.62" dur="6.06"> nandrahona ny 30 taona teo ho eo izay nitondra ny lalao "Ary handratra anao aho</text>
<text sub="clublinks" start="503.68" dur="4.8"> raha tsy mahazo izay tadiaviko "ambaratonga.</text>
<text sub="clublinks" start="508.48" dur="2.87"> Haavo ny ahiahy: 9000+</text>
<text sub="clublinks" start="511.35" dur="7.34"> Navelako izy handray ilay horonan-taratasy. Vitanay ny lalao. Nandeha nody izahay sy DM. Araka ny nataonay dia hoy aho</text>
<text sub="clublinks" start="518.69" dur="5.58"> Izy dia nilaza mazava tsara, "Tsy mifandray amin'ireo olona ireo intsony isika, ary raha mahita</text>
<text sub="clublinks" start="524.27" dur="3.45"> Handao azy ireo eo amin'ny fivarotana kilalao izahay izao. "</text>
<text sub="clublinks" start="527.72" dur="7.32"> Tsy niresaka tamin'izy ireo intsony izahay, afa-tsy INDRINDRA. Tapaka fotsiny ny fifandraisana,</text>
<text sub="clublinks" start="535.04" dur="4.38"> Nilaza tamin'izy ireo fa tsy afaka mihazakazaka ny lalao intsony ny DM, ary dia izay.</text>
<text sub="clublinks" start="539.42" dur="5.25"> Amin'izao fotoana izao dia mandà tsy handeha any an-tranon'olona aho raha tsy hoe fantatro tsara izy ireo.</text>
<text sub="clublinks" start="544.67" dur="8.61"> Ie, faly aho fa niaina ny OP nanambara ny tantara, satria izany dia toe-javatra henjana ara-dalàna.</text>
<text sub="clublinks" start="553.28" dur="4.97"> Mora tokoa ny miatrika mpampijaly rehefa mijoro amin'ny tenanao, fa rehefa misy zavatra</text>
<text sub="clublinks" start="558.25" dur="7.61"> mandehana amin'ny feo mankany amin'ny ara-batana ary mety hamoy ny ainao ianao amin'ny fijoroana, tsara kokoa ny manaiky</text>
<text sub="clublinks" start="565.86" dur="5.66"> rehefa milalao lalao. Mitandrema amin'ny filalaovana any an-tranon'olona ary alao antoka</text>
<text sub="clublinks" start="571.52" dur="4.045"> handoavana ny findainao ary hitondra fonosana bateria ivelany miaraka aminao.</text>
<text sub="clublinks" start="575.565" dur="2.915"> Ahoana ny hevitrareo rehetra momba an'io toe-javatra io?</text>